admin – SuvaSandes
April 14, 2021 adminLeaveaComment on रेमिट्यान्सको जग हल्लिएको वर्ष हो दुइ हजार सतहत्तर
१ वैशाख, काठमाडौं । पूर्वी चितवनका राजन रिजालले काठमाडौंका म्यानपावर कम्पनीहरुको चक्कर काटेको एक हप्ता बित्यो । कोरोना महामारीका कारण बिथोलिएको विदेशमा काम गर्न जाने उनको डेढ वर्षदेखिको योजना यो पटक पनि पूरा हुने छाँट छैन ।‘म गाडी चलाउने मान्छे, जुन कम्पनी पनि कन्स्ट्रक्सन कम्पनीमा अरु नै काममा जाने हो भने मात्रै डिमान्ड (माग) आएको […]
April 14, 2021 adminLeaveaComment on नेपाली विद्यार्थीले बनाए इलेक्ट्रिकल भेहिकल
१७ चैत, काठमाडौं । नेकपा एमालेका नेता सुरेन्द्र पाण्डेले पार्टी नेतृत्वले स्पष्टीकरण सोध्दा लगाएका आरोपहरु झूटाे भएको बताएका छन् । मंगलबार अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई सम्बोधन गर्दै स्पष्टीकरणको जवाफ पठाएका नेता पाण्डेले भनेका छन्, ‘तपाईंले मलाई आरोपका रुपमा विभिन्न प्रश्नहरु तेर्स्याउनुभएको छ । प्रश्नहरु हेर्दा तपाईंमाथि नै धेरै प्रश्न सोझिएका छन् ।’ आफूलाई प्रचण्डको मतियार […]
March 20, 2021 March 28, 2021 adminLeaveaComment on नेपाली विद्यार्थीले बनाए इलेक्ट्रिकल भेहिकल
March 20, 2021 April 14, 2021 adminLeaveaComment on दाँतलाई बलियो र सुरक्षित राख्ने तरिका
दातँलाई सुरक्षित र स्वस्थ राख्नको लागि नियमित रुपमा हेरचाह र परीक्षण गर्नु जरुरी हुन्छ । त्यसको साथ साथै दिनको दुईपटक ब्रश गर्नु पर्छ । र गुलियो खानेकुरा कम खानुपर्छ अथवा खाएपनि मुख कुल्ला गरिहाल्नु पर्छ । दाँत वा मुखको समस्या हुनु भनेको शरिरमा कुनै समस्या हुनु हो । राम्रो चम्किलो र स्वस्थ दाँत हाम्रो अनुहारको […]
March 20, 2021 April 14, 2021 adminLeaveaComment on खाना खाँदा यसकारण राम्रोसँग चपाएर खानुपर्छ
धेरैजसो मानिसहरु खानेकुरा कसरी खाने ? कति खाने ? भन्ने कुरालाई नजरअन्दाज गरिदिन्छन् । अझ भनुँ, राम्रोसँग चपाएर खानुपर्छ भन्ने कुरालाई त त्यति ध्यान नै दिँदैनन् । तर पाचनक्रियाको लागि यो धेरै महत्वपूर्ण कुरा हो । जब हामी पाचनक्रियाको कुरा गर्छौं, यसको प्रसङ्ग पेटबाट सुरु हुन्छ भनेर बुझ्ने गर्छौं । तर वास्तवमा खानेकुरा पेटमा नपुग्दै […]
March 20, 2021 April 14, 2021 adminLeaveaComment on कौसी खेती गर्ने ५ सय घरधुरीलाई अनुदान दिने भएको छ
बागमती प्रदेश सरकारले कौसी खेती गर्ने ५ सय घरधुरीलाई अनुदान दिने भएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन गरेको बजेटले एक वर्षभरिमा ५ सय घरधुरीलाई अनुदान दिएर कौसी खेतीमा आकर्षित गर्न लागिएको प्रदेश सरकार अन्तर्गतको कृषि ज्ञान केन्द्रका कार्यालय प्रमुख निर्मल गदालले जानकारी दिए । केन्द्रका अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा कौसी खेती गर्न सकिने करिब […]
March 20, 2021 April 14, 2021 adminLeaveaComment on करेसाबारी मा तरकारी
घर आसपासमा सागसब्जी लगाएपछि ताजा र शुद्ध खान पाइने मात्र होइन यसबाट अरु थुप्रै लाभ मिल्छ । यसले शारीरिक रुपमा सक्रिय राख्छ, मानसिक रुपमा तन्दुरुस्त । भान्साको फोहोर व्यवस्थापन गर्ने ठाउँ मिल्छ । जस्तो कि, तपाईं थोरै फुर्सद हुनसाथ करेसाबारीको काममा लाग्नुहुन्छ । अर्थात आफ्नो समयलाई उत्पादनसिल बनाउनुहुनेछ । यदि त्यसो नहुँदो हो त फुर्सदमा […]
March 20, 2021 April 14, 2021 adminLeaveaComment on प्रकृतिसँग जीवनको लय मिलाउनु पर्छ
बिहान सूर्य उदाउँछ । साँझ अस्ताउँछ । रात हुन्छ, फेरी दिन । महिना बद्लिन्छ । ऋतु फेरिन्छ । समयको एउटा चक्र पुरा हुन्छ । यही चक्रसँगै अन्न अंकुराउँछ, पालुवा पलाउँछ, फूल फुल्छ, फल लाग्छ, पाक्छ । कहिले जाडो याम सुरु हुन्छ, कहिले वर्षा । माटो, हावापानी अनुसार बोट–बिरुवा उम्रन्छ । फैलिन्छ । अन्नबाली, फलहरु फल्छन् […]
March 20, 2021 April 14, 2021 adminLeaveaComment on निकै छ बर्राेको औषधीय महत्व
बर्राे एक पतझर जातिको रुख हो । आयुर्वेदमा त्रिफलाको रुपमा व्याख्या गरिएको यो एक बहुउपयोगी वनस्पति हो । वनस्पति विभागका अनुसार बर्राे नेपालबाहेक पनि भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बर्मा, थाइल्याण्ड, इण्डोनेसिया, चीन, मलेसिया लगायत नेपालको उष्णप्रदेशीय जंगलहरूमा ३०० मिटरदेखि ११ सय मिटरसम्मको दुरीमा पाउन सकिन्छ । मंसिरदेखि फागुन महिनासम्म बर्राेको फल संकलन गर्ने गरिन्छ । फल […]